Ihe nkiri Mystery 40 kacha mma iji gụgharịa ugbu a - Ntụrụndụ
Kichin Na-Adịgide Adịgide Akpụkpọ Anụ Ezi Ntụziaka Agba Style Idozi Ozugbo Ntutu Isi Ahụike Akwụkwọ Dị Jụọ Ọkachamara
Ihe nkiri Mystery 40 kachasị mma na-asọ ugbu a, site na 'Enola Holmes' na 'Ihe Nfe Dị Mfe'
Ikekwe ị breezed site ọzọ eziokwu-mpụ akụkọ karịa ka ị nwere ike ịgụta, ma ọ bụ ma eleghị anya, ị na-achọsi ike na nnukwu ihe nkiri nke ga-etinye nkà ịmezi mpụ gị (nke ọma, mwepu akụkụ akụkọ akụkọ na-adịghị mma). Kedu ụzọ ọ bụla, ọ na-esiri ike iguzogide ezigbo onyedunit nke na-eme ka ị nọrọ n’ọnọdụ oche gị. Na ekele na nkwanye nyiwe dị ka Netflix , Amazon Prime na Hulu , anyị enwetala ọbá akwụkwọ sara mbara nke ihe nkiri kacha omimi dị omimi ị nwere ike ịmalite ịgha ugbu a.
Site na Enola Holmes ka Nwa agbọghọ na ongbọ oloko , lee ihe nkiri 40 dị omimi nke ga-adị gị ka onye nyocha nke ụwa.
Njikọ: 30 Psychological Thrillers na Netflix Nke ahụ Ga - eme Ka Question Jụọ Ajụjụ Niile
1. 'Mma si ’(2019)
Daniel Craig kpakpando dịka onye nyocha onwe onye Benoit Blanc na ihe nkiri a na-ahọpụta Oscar. Mgbe Harlan Thrombey, onye ode akwụkwọ akụkọ bara ọgaranya, nwụrụ anwụ na nnọkọ oriri nke ya, onye ọ bụla nọ na ezinaụlọ ya na-anaghị arụ ọrụ ghọrọ onye a na-enyo enyo. Onye nyocha a ọ ga - enwe ike ịhụ site na aghụghọ niile ma kpọgide onye na - egbu egbu n'ezie? (FYI, ọ dị mma ịkọba na Netflix kwụrụ ụgwọ na-adịbeghị anya maka usoro abụọ, yabụ na-atụ anya ịhụ karịa nke Onye nyocha Blanc.)
Igba ugbu a
2. ‘Enola Holmes’ (2020)
Naanị ụbọchị mgbe ihe nkiri a meriri Netflix, ọ rịa elu n'elu ebe ahụ , anyị ga-ahụrịrị ihe kpatara ya. Site n'ike mmụọ nsọ nke Nancy Springer's Ihe omimi nke Enola Holmes akwụkwọ, usoro na-esochi Enola, nwanne nwanyị nke obere nke Sherlock Holmes, n'oge 1800 na England. Mgbe nne ya di omimi na-efu na ụtụtụ nke afọ 16, Enola na-aga London iji nyochaa. Njem ya gbanwere bụrụ ihe ịtụnanya na-akpali akpali metụtara nwatakịrị gbapụrụ agbapụ Lord (Louis Partridge).
3. 'Ahụrụ M Gị' (2019)
Ana m ahụ gị bu ihe nke whodunit na nmehie ojoo, obu ezie na enwere otutu oge ebe o na adi ka ihe di egwu. Na ihe nkiri a, otu onye isi ime obodo aha ya bụ Greg Harper (Jon Tenney) were ihe gbasara nwatakịrị nwoke dị afọ iri na-efu, mana ka ọ na-eme nyocha, ihe ndị na-adịghị mma na-amalite ịwakpo ụlọ ya.
4. 'Mmiri gbara ọchịchịrị' (2019)
N'ime ihe ngosi nke ihe omume, anyị na-ahụ ezigbo ikpe nke ọka iwu Robert Bilott megide ụlọ ọrụ na-ahụ maka kemịkal, DuPont. Mark Ruffalo kpakpando dika Robert, onye ezigara ka o nyochaa otutu ihe anumanu di omimi na West Virginia. Otú ọ dị, ka ọ na-abịarukwu eziokwu ahụ nso, ọ na-achọpụta na ndụ nke ya pụrụ ịdị n'ihe ize ndụ.
5. 'Ogbugbu na Orient Express' (2017)
Dabere na akwụkwọ Agatha Christie nke 1934 nke otu aha ahụ, ihe nkiri ahụ na-eso Hercule Poirot (Kenneth Branagh), onye nyocha ama ama nke na-anwa idozi ogbugbu na ọrụ ụgbọ oloko Orient Express tupu onye gburu ya enweta onye ọzọ. Igwe kpakpando a gụnyere Penélope Cruz, Judi Dench, Josh Gad, Leslie Odom Jr. na Michelle Pfeiffer.
A na-ahụta ihe nkiri a dị oke egwu dị ka otu n'ime ọrụ kacha mma Christopher Nolan na-arụ, ọ bụ ezie na ọ bụ na teknụzụ na-atọ ụtọ nke uche, enwere ụfọdụ ihe omimi. Ihe nkiri a na-eso Leonard Shelby (Guy Pearce), onye bụbu onye nyocha mkpuchi mkpuchi nke na-arịa anterograde amnesia. N'agbanyeghị ncheta oge dị mkpụmkpụ ya, ọ na-anwa iji nyochaa igbu nwunye ya site na ọtụtụ foto Polaroid.
7. ‘Onye ọbịa A Na-ahụ Anya’ (2016)
Mgbe Adrián Doria (Mario Casas), onye ọchụnta ego na-eto eto, tetara na imechi ụlọ akpọchiri ya na onye ọ hụrụ n'anya nwụrụ anwụ, ejidere ya na-agha ụgha maka igbu ọchụ ya. Mgbe ọ nọ na mgbapụta, ya na otu ọka iwu ama ama, yana ọnụ, ha na-anwa ịchọpụta onye haziri ya.
8. 'North Site Northwest' (1959)
Ihe omimi a nke ihe nlere anya nke oma bu ihe omimi, ma ewere ya dika otu n’ime ihe nkiri kachasi oge. Ntọala na 1958, ihe nkiri a lekwasịrị anya na Roger Thornhill (Cary Grant), onye mehiere onye ọzọ ma jigide ya site na mmadụ abụọ dị omimi na ebumnobi dị egwu.
9. ‘Asaa’ (1995)
Morgan Freeman kpakpando dịka onye nyocha ezumike nka William Somerset, onye jikọtara ya na onye nchọpụta ọhụrụ David Mills (Brad Pitt) maka ikpe ikpeazụ ya. Mgbe ha chọpụtasịrị ọtụtụ ogbugbu ndị obi tara mmiri, ụmụ nwoke ahụ mechara chọpụta na ọ bụ onye na-egbu ihe na-achọkarị ndị na-anọchite anya otu n'ime mmehie asaa ahụ. Kwadebe maka ngwụcha ngwụcha nke ga - eme ka sọks gị ...
10. 'Mfe Dị Mfe' (2018)
Stephanie (Anna Kendrick), nwanyị di ya nwụrụ na onye vlogger, ghọrọ ezigbo enyi Emily (Blake Lively), onye ọfụma onye isi PR, mgbe ha kesịrị mmanya ole na ole. Mgbe Emily na-apụ n'anya na mberede, Stephanie na-eweghara onwe ya iji nyochaa okwu ahụ, mana ka ọ na-egwu ala n'oge gara aga nke enyi ya, ekpughere ọtụtụ ihe nzuzo. Ma Lively na Kendrick na-enye arụmọrụ siri ike na ọchị a na-atọ ọchị.
11. ‘Ifufe Osimiri’ (2017)
Ihe omimi nke igbu mmadu n’Ebe Ọdịda Anyanwụ na-akọ banyere nchọpụta na-aga n’ihu banyere igbu ọchụ na Indian Reservation Indian na Wyoming. Onye ọrụ ọrụ anụ ọhịa bụ Cory Lambert (Jeremy Renner) na onye ọrụ FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen) na-arụkọ ọrụ iji dozie ihe omimi a, mana ka ha na-egwu ala, ha ga-enwe ohere ịta ahụhụ ụdị nsogbu a.
12. ‘Ihe nketa’ (2020)
Mgbe nna ochie bụ Archer Monroe (Patrick Warburton) nwụsịrị, ọ hapụrụ ezinụlọ ya ọmarịcha akụ ya. Agbanyeghị, nwa ya nwanyị bụ Lauren (Lily Collins) na-anata ozi vidiyo mgbe ọpụpụ sitere na Archer wee chọpụta na ọ na-ezobe ihe nzuzo gbara ọchịchịrị nke nwere ike ibibi ezinụlọ ahụ dum.
13. '’chọ' (2018)
Mgbe nwa David Kim (John Cho) Margot (Michelle La) dị afọ 16 na-apụ n'anya, ndị uwe ojii enweghị ike ịchụ ya. Mgbe a na-eche na nwa ya nwanyị anwụọla, David, na-enwe mmetụta na-enweghị olileanya, na-eme ihe banyere aka ya site na ịbanye na Margot dijitalụ gara aga. Ọ na-achọpụta na ọ na-ezochi ihe nzuzo ole na ole na, nke ka njọ, na onye nyocha ahụ e kenyere na ikpe ya enweghị ike ịtụkwasị obi.
14. 'Nice Guys' (2016)
Ryan Gosling na Russell Crowe na-eme ka ndị mmekọ a na-atụghị anya na ihe nkiri nkiri ọchị a. Ọ na - esote Holland March (Gosling), anya nke anya na - adịghị, nke ya na onye mmanye aha ya bụ Jackson Healy (Russell Crowe) ga - enyocha ihe banyere otu nwa agbọghọ aha ya bụ Amelia (Margaret Qualley). Dika o siri pụta, onye ọ bụla tinyere aka n'okwu a na-anwụkarị ...
Ndị nkatọ enweghị mmasị na ihe omimi a na-atọ ụtọ n'oge mbupute ya izizi, mana atụmatụ aghụghọ ya ga-eme ka ị banye na mbido ruo na njedebe. Nkasi obi bụ ihe gbasara dibia uche, John Clancy (Anthony Hopkins), onye ya na ndị ọrụ FBI, Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan), ka hachisie onye na-egbu ọchụ dị egwu nke na-egbu ndị o metụtara site n'ụzọ ndị ọzọ.
16. 'Ihe ngosi' (1985)
Ọ bụ ezigbo mfe ịhụ ihe mere Ihe ngosi azụlitewo ụdị nnukwu òtù nzuzo na-esote, site na ihe na-enweghị atụ na oge ya a na-apụghị ịgụta ọnụ. Ihe nkiri a, nke gbadoro ụkwụ na bọl egwuregwu a ma ama, na-eso ndị ọbịa isii akpọrọ ka ha rie nri abalị na nnukwu ụlọ. Ihe na-agbanwe n'ọchịchịrị, agbanyeghị, mgbe onye akpọrọ ahụ gburu, na-atụgharị ndị ọbịa na ndị ọrụ ya niile na-enyo enyo. Ndị otu a gụnyere Eileen Brennan, Tim Curry, Madeline Kahn na Christopher Lloyd.
17. ‘Osimiri Mystic’ (2003)
Dabere na akwụkwọ Dennis Lehane na 2001 nke otu aha ahụ, ihe nkiri omekome na-emeri Oscar na-eso Jimmy Marcus (Sean Penn), onye bụbu onye nwatakịrị nwanyị gburu. Ọ bụ ezie na enyi ya mgbe ọ bụ nwata na onye nyocha banyere igbu ọchụ, Sean (Kevin Bacon), nọ n'okwu ahụ, Jimmy malitere nyocha nke aka ya, ihe ọ mụtara na-eme ka o chee na Dave (Tim Robbins), enyi ọzọ bụ nwata, nwere ihe ọ ga-eme na ya nwa nwanyị nwụrụ.
ndepụta nke ihunanya fim Hollywood
18. 'Nwa agbọghọ nọ na ụgbọ oloko' (2021)
Ekwela ka anyị mejọọ-Emily Blunt pụtara ìhè na ihe nkiri 2016, mana mmegharị Bollywood a ga - ezigharịrị azụ gị azụ. Nwanyị nwanyị Parineeti Chopra (nwa nwanne nna Priyanka Chopra) kpakpando dịka onye ịgba alụkwaghịm na-enweghị onye na-eche banyere di na nwunye zuru oke nke ọ na-ahụ kwa ụbọchị site na windo ụgbọ oloko. Ma mgbe ọ hụrụ ihe na-enweghị isi n'otu ụbọchị, ọ na-eleta ha, na-emecha daba onwe ya n'etiti nchọpụta onye na-efu.
19. 'Ihe Dị N'okpuru' (2020)
Na ileba anya mbu, ọ dị ka ihe ngosi ihe nkiri Hallmark gị, mana mgbe ahụ, ihe na-adọrọ mmasị (ma dị mgbagwoju anya). Na Ihe Dị N'okpuru , anyị na-agbaso otu onye ntorobịa na-adịghị mma nke aha ya bụ Liberty (Ema Horvath) nke mechara nweta ohere izute nne ya ọhụụ mara mma. Agbanyeghị, onye ọhụụ a rọrọ nrọ yiri obere Ọzọkwa maa mma. Nke ukwuu nke mere na Liberty malitere iche na ọbụnadị mmadụ.
The akụkọ mgbe ochie Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) na ya amamiihe ibe, Dr. John Watson (Jude Law), na-goro iji soro ala Lord Blackwood (Mark Strong), a Oghere Usoro na-eji ọchịchịrị anwansi igbu ndị ọ tara. Ọ bụ naanị oge tupu duo amata na onye na-egbu egbu nwere ọbụna nnukwu atụmatụ iji chịkwaa Britain dum, ma ha nwere ike ịkwụsị ya n'oge? Jikere maka otutu ihe.
21. 'Nnukwu ụra' (1946)
Philip Marlowe (Humphrey Bogart), onye nyocha nke onwe, ka enyere aka ijikwa nwa ya nwanyị nnukwu ụgwọ ịgba chaa chaa. Mana enwere otu nsogbu: Ọ na - apụta na ọnọdụ bụ otutu gbagwojuru anya karịa ka ọ dị, n'ihi na ọ metụtara nhichapụ ihe omimi.
22. 'Nwanyị gara aga' (2014)
Rosamund Pike agbadoro nka nke igwu oyi, ihe odide a na-agbakọ nke na-eme ka obi sie anyị ike, ọ na-abụkarị eziokwu na ihe nkiri a na-atọ ụtọ. Nwaanyị gara na-esote onye edemede mbụ aha ya bụ Nick Dunne (Ben Affleck), onye nwunye ya (Pike) na-atụghị anya na ọ ga-efu na ncheta agbamakwụkwọ nke ise ha. Nick ghọrọ onye a na-enyo enyo, onye ọ bụla, gụnyere ndị mgbasa ozi, na-amalite ịjụ ajụjụ di na nwunye ahụ yiri ka ha zuru oke.
23. 'Nkọwa nke Pelican' (1993)
Ekwela ka ndị dị ala Tomato rere ure akara nzuzu-Julia Roberts na Denzel Washington bụ ndị na-egbukepụ egbukepụ na nkata ahụ jupụtara na nsị. Ihe nkiri a na-akọ akụkọ Darby Shaw (Julia Roberts), nwa akwụkwọ iwu nke akwụkwọ iwu ya gbasara igbu ọchụ nke ndị ọka ikpe abụọ nke Supremelọikpe Kasị Elu na-eme ka ọ bụrụ ndị ọhụụ kacha ọhụrụ. Site n'enyemaka nke onye nta akụkọ, Gray Grantham (Denzel Washington), ọ na-agba mbọ iru nke eziokwu mgbe ọ na-agba ọsọ.
24. 'Primal ụjọ' (1996)
Ọ na-eme Richard Gere dị ka Martin Vail, onye ọka iwu Chicago ama ama ama ama ka a hapụ ndị ahịa dị elu. Ma mgbe o kpebiri ịgbachitere nwata nwoke ebe ịchụ aja (Edward Norton) onye ebubo boro igbu archbishọp Katọlik n'ụzọ obi ọjọọ, ikpe ahụ bịara bụrụ ihe mgbagwoju anya karịa ka ọ tụrụ anya ya.
25. 'Lovemụ ịhụnanya' (2020)
Ọ dị anya na nke a na-ahụ anya ma jupụta na oge ọchị nke, ọ bụrụ na ị jụọ anyị, na-eme ka ihe omimi nke igbu ọchụ mara mma. Issa Rae na Kumail Nanjiani kpakpando dika Jibran na Leilani, bu di na nwunye ndi nwekoro uzo ha. Ma mgbe ha hụrụ onye gburu mmadụ ịnyịnya ígwè na ụgbọ ala ha, ha na-agba ọsọ, na-eche na ọ ga-akara ha mma ịkọwa onwe ha ihe omimi ahụ, karịa itinye oge nga. N'ezie, nke a na-eduga n'ọgba aghara niile.
26. ‘Tupu m lakpuo ụra’ (2014)
Mgbe ọ nwụsịrị na mwakpo dị nso, Christine Lucas (Nicole Kidman) na mgba anterograde amnesia. Yabụ kwa ụbọchị, ọ na-edebe vidiyo vidiyo ka ọ na-amata di ya. Mana dika o jiri nwayọ na-echeta ụfọdụ ihe ncheta ya ndị dị anya, ọ matara na ụfọdụ ncheta ya ekwekọghị n’ihe di ya na-agwa ya. Nye ka ọ ga-atụkwasị obi?
27. ‘N’okpo ọkụ n’abalị’ (1967)
Ihe nkiri ihe omimi nke ichikota bu ihe kariri akuko nyocha, na emetu aka dika ndi mmadu na ndi mmadu. Ntọala n'oge ikike ruuru mmadụ, ihe nkiri a na - esochi Virgil Tibbs (Sidney Poitier), onye nchọpụta ojii nke na - achọghị iji aka ya na ndị ọrụ ọcha ọcha, Chief Bill Gillespie (Rod Steiger) iji dozie igbu ọchụ na Mississippi. BTW, ihe omimi ihe omimi a nwetara ise Awards Awards, gụnyere Foto kacha mma.
28. 'Ọnwụ na-egbu ọchụ' (2019)
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya Abalị Datebọchị , mgbe ahụ ị ga-atọ ụtọ nke a ntochi. Adam Sandler na Jennifer Aniston na-egwu egwu na onye ọrụ New York na nwunye ya, onye na-edozi isi. Ha abụọ malitere njem na Europe iji tinye ihe na-akpali akpali na mmekọrịta ha, mana mgbe ha zutere otu nsogbu, ha na-ahụ onwe ha n'etiti ihe omimi igbu ọchụ metụtara otu onye billionaire nwụrụ anwụ.
29. Nnụnụ Ala Ọma Jijiji ’(2019)
Mgbe ha tinyechara na triangle ịhụnanya na Teiji Matsuda (Naoki Kobayashi) na enyi ya Lily Bridges (Riley Keough), Lucy Fly (Alicia Vikander), onye na-arụ ọrụ dị ka onye ntụgharị okwu, ghọrọ onye na-enyo enyo maka igbu Lily mgbe ọ na-apụ na mberede. Ihe nkiri a sitere n’edemede Susanna Jones nke 2001 nke otu aha ahụ.
30. ‘Ihe Nlekọta nke Ọkpụkpụ’ (2019)
N'ime ihe omumu mpụ Spanish a, nke bụ ihe nkiri nke abụọ na Baztán Trilogy na mmegharị nke akwụkwọ Dolores Redondo, anyị lekwasịrị anya na onye uwe ojii bụ Amaia Salazar (Marta Etura), onye ga-enyocha ọtụtụ ndị na-egbu onwe ha na-ekerịta ụdị egwu ahụ. Na nkenke, ihe nkiri a bụ nkọwa kpụ ọkụ n'ọnụ.
Samuel L. Jackson na-egwuri egwu na onye bụbu nna aha ya bụ Tom Cutler, onye nwere ụlọ ọrụ mkpocha mpụ. Mgbe akpọrọ ya ka ọ kpochapụ ebe obibi ndị dịpụrụ adịpụ mgbe agbapụchara égbè ahụ, Tom nụrụ na ya n'amaghị ama hichapụ ihe akaebe dị oke mkpa, na-eme ka ọ bụrụ akụkụ nke nnukwu mkpuchi mpụ.
N’ime ụdị egwu egwu a, Jodie Foster bụ Kyle Pratt, onye injinia ụgbọelu di ya nwụrụ onye bi na Berlin. Ka ya na nwa ya nwanyị na-efe efe ịlaghachi U.S. iji burufee ozu di ya, nwa ya nwanyị funahụrụ ya mgbe ọ ka nọ n'ụgbọ elu. Iji mee ka ihe ka njọ, ọ dịghị onye nọ n'ụgbọelu ahụ na-echeta na ọ hụrụ ya, na-eme ka o nwee obi abụọ na isi adịghịzi.
33. ‘L.A. Ihe nzuzo '(1997)
Ọbụghị naanị na ndị nkatọ na-ekwu okwu banyere ihe nkiri a, mana ahọpụtara ya itoolu (ee, iteghete ) Academy Awards, gụnyere Best Foto. Ntọala na 1953, ihe nkiri mpụ ahụ na-eso otu ndị uwe ojii, gụnyere Lieutenant Ed Exley (Guy Pearce), onye uwe ojii Bud White (Russell Crowe) na Sergeant Vincennes (Kevin Spacey), ka ha na-enyocha ogbugbu a na-edozighị, ebe ha niile nwere ebumnobi dị iche iche. .
34. 'Ebe gbara ọchịchịrị' (2015)
Dabere na akwụkwọ akụkọ Gillian Flynn nke otu aha ahụ, Ebe gbara ọchịchịrị ógbè ndị dị na Libby (Charlize Theron), onye na-ebi na onyinye nke ndị bịara abịa na-emesapụ aka mgbe nnukwu mgbasa ozi nke nne ya na ụmụnne ya nwanyị ihe karịrị afọ iri gara aga. Dịka nwatakịrị nwanyị, ọ na-agba akaebe na nwanne ya nwoke nwere mpụ ahụ, mana mgbe ọ gaghachigharịrị ihe ahụ merenụ dịka okenye, ọ na-enyo enyo na enwere ọtụtụ ihe na akụkọ ahụ.
35. ‘Nwa agbọghọ furu efu’ (2020)
Officelọ Ọrụ Onye na-eme ihe nkiri Amy Ryan bụ onye na-akwado ndụ na onye na-akwado igbu ọchụ na-akwado Mari Gilbert na ihe omimi a, nke sitere na akwụkwọ Robert Kolker, Girlsmụ agbọghọ ndị a na-efu efu: American Mystery a na-edozighị . N'ịchọsi ike ịchọta nwa ya nwanyị na-efu efu, Gilbert bidoro nyocha, nke na-eduga n'ịchọpụta ọtụtụ ogbugbu nke ụmụ agbọghọ na-arụ ọrụ mmekọahụ.
36. ‘Gara’ (2012)
Mgbe ọ lanarịrị ọnwụnwa ịtọrọ mmadụ, Jill Parrish ( Amanda Seyfried ) na-anwa ike ya niile iji gaa n'ihu na ndụ ya. Mgbe ọ natara ọrụ ọhụụ wee kpọọ nwanne ya nwanyị ka ọ nọnyere ya, ọ na-adịtụ ka ọ dị ihe ọ na-eme. Ma mgbe nwanne ya nwanyị lara na mberede n'otu ụtụtụ, ọ na-enyo enyo na otu onye ntọrọ ahụ na-eso ya ọzọ.
37. 'Window windo' (1954)
Tupu e nwee Nwa agbọghọ na thegbọ oloko , enwere ihe omimi a. Na ihe nkiri ahụ, anyị na-eso onye ọkachamara na-ese foto oche oche oche aha ya bụ L. B. Jefferies, onye na-ele ndị agbata obi ya anya na windo ya. Ma mgbe ọ hụrụ ihe yiri ka ọ bụ igbu ọchụ, ọ na-amalite inyocha ma hụ ndị ọzọ nọ n'ógbè ahụ n'oge usoro ahụ.
38. 'Onye ohi' Clovehitch '(2018)
Mgbe Tyler Burnside dị afọ iri na isii (Charlie Plummer) chọtara ọtụtụ polaroid na-enye nsogbu n’aka nna ya, ọ na-enyo enyo na ọ bụ nna ya kpatara ogbugbu obi ọjọọ nke ọtụtụ ụmụ agbọghọ. Na-ekwu banyere egwu.
Na fim ahụ, anyị na-eso otu ndị ọbịa nọrọ na ụlọ dịpụrụ adịpụ mgbe oke mmiri ozuzo dakwasịrị Nevada. Mana ihe na-agba ọchịchịrị mgbe ndị mmadụ nọ n’otu ahụ na-egbu onwe ha otu otu. Ka ọ dị ugbu a, onye na-egbu ọchụ na-echere mkpebi ya n'oge ikpe nke ga-ekpebi ma a ga-egbu ya. Ọ bụ ụdị ihe nkiri ga - eme ka ị maa gị nkọ.
40. ‘Angel nke M’ (2019)
Afọ ole na ole mgbe nwatakịrị nwanyị ọhụụ Rosie nwụsịrị, Lizzie (Noomi Rapace) ka na-eru uju ma na-agbasi mbọ ike ịga n'ihu. Ma mgbe ọ hụrụ nwatakịrị nwanyị aha ya bụ Lola, Lizzie kwenyesiri ike na ọ bụ nwa ya nwanyị n'ezie. Ọ dịghị onye kwere na ya, mana ọ na-ekwusi ike na ọ bụ n'ezie Rosie. Ọ ga - abụrịrị ya, ka Lizzie karịrị ya isi?
Njikọ: * Ihe omumu ohuru a ga - agbadata dika otu n'ime ihe nkiri kacha mma nke afọ
Categories Jụọ Ọkachamara Akpụkpọ Anụ Atụmatụ & Ndụmọdụ
mgbatị mgbatị maka abụba afọ
edozi isi dị iche iche maka ịkpụcha laye
esi ejikwa ntutu dị arọ daa
Toner maka mmanu mmanu akpụkpọ
kacha mma na-eto eto na oge niile
mkpụrụ bara ụba na protein